BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal - Ismariwaaga dhuxusha Kismaayo
Ismariwaaga dhuxusha Kismaayo
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 31 Oktoobar, 2012, 15:42 GMT 18:42 SGA
Waxaa uu muran ka taagan yahay sida loola tacaalayo malaayiin jawaan oo dhuxul ah, taas oo ku xaraysneyd dekadda magaalada Kismaayo, halkaas oo ay maamuli jireen kooxda Al-Shabaab. Maqalmp3
Soomaaliya waxaa uu muran ka taagan yahay sida loola tacaalayo malaayiin jawaan oo dhuxul ah taasoo ku xaraysneyd dekadda magaalada Kismaayo halkaas oo ay maamuli jireen kooxda Shabaab.
Tan ayaa waxaa ay ka dhalatay xayiraad uu Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ku soo rogay dhuxusha Soomaaliya laga dhoofinayo sanadkan horaantiisii, iyadoo waqtigaasna ay Qaramada Midoobay sheegtay ay dakhliga ka soo baxa dhuxusha ay gacanta u gali jirtay kooxda Shabaab oo markaas maamulaysay magaalada.
Balse kadib markii Shabaab laga saaray magaalada ayaa ganacstada waxay haatan doonayaan in xayiraadaas meesha laga saaro si ay ugu yaraan u dhoofiyaan dhuxusha meesha taallo. Maxamuud Cali Maxamad ayaa warbixin ka diyaariyay arrintaasi.